Ma hiigaanka Golis: arday ku guuleystay gaari ay bixisay shirkadda Golis | Golis Telecom Somalia
Ma hiigaanka Golis: arday ku guuleystay gaari ay bixisay shirkadda Golis
Munaasabad lagu qabtay xarunta wayn ee jaamacadda Bariga Africa ayaa shirkadda Golis Telecom Somalia ay ku wareejisay mid kamid ah hadiyadihii ugu qaalisaa ee ay la wadaagto macaamiisheeda taas oo ay ugu talagashay inay ku dhiiri galiso ardayda jaamacadda Bariga Africa ee kaalinta libaax ka qaatay kal dhaqameedki labaad ee lagu qabtay dhawaan xarunta Jaamacadda.
Hadiyadan oo ahayd Gaari nooca raaxada ah oo uu ugu guulaystay hab bakhtiyaanasiib ah mid kamid ah ardayda jaamacadda Bariga Africa xiligii lagu guda jiray barnaamijka Mahiigaan oo ay shirkadda Golis ugu talagashay inay uga qayb qaadato kal dhaqameedkii labaad ee jaamacadda Bariga Africa kaas oo ay ardaydu kusoo bandhigeen hidaha iyo dhaqanka soo-jireenka ah ee leedahay umada Soomaaliyeed.
Madaxa waaxda Suuqgaynta shirkadda Golis C/raxmaan C/laahi Jaamac (Dayax) ayaa munaasbada furay isagoo xusay in Gaarigan quruxda badan iyo hadiyadaha kaleba ay ugu talagashay inay shirkadda Golis ku dhiiri galiso ardayda Jaamacadda Bariga Africa oo kor u qaaday hidaha dhaqanka Soomaaliyeed intii lagu guda jiray kal dhaqameedka labaad ee Jaamacadda Bariga Africa.
Gudoomiye ku xigeenka Jaamacadda Bariga Africa Maxamed Maxamuud Ciise ayaa dhankiisa uga mahaceliyay guud ahaa barnaamijka Mahiigaan shirkadda Golis oo uu xusay inay had iyo jeer garab taagantahay bahda waxbarashada isagoo xusay in barnaamijkaan uu ahaa mid ay mudantahay in looga daydo shirkadda Golis.
Ardayga ku guulaystay gaariga hadiyada ah oo lagu magacaabo Yuusuf cumar sheikh mxamed ayaa lagu wareejiyay furaha gaarigiisa cusub kaas oo uu nasiibkiisu waafajiyay in Golis ay u hibayso gaari nooca raaxada ah isagoo madasha ka hadlayna waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsanyahay hadiyada qaaliga ah ee ay gudoonsiisay shirkadda Golis Telecom.
“Dareen ahaan aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta kaxaysto gaarigan oo aan ku helay bakhtiyaansiibkii nala dhex dhigay intii aan ku guda jirnay kal dhaqameedki labaad kaas oo u dhacay si cadaalad ah waana uga mahadcelinayaa shirkadda Golis” ayuu yiri Yuusuf cumar sheikh mxamed.
Barnaamijka Mahiigaan ayaa sidoo kale shirkaddu ku bixisay hadiyado kala duwan oo ay kamid ahaayeen Computero Laptob ah, Mobilo, Dhar, kabo, qalab Sports iyo hadiyado kale waxana maamulka shirkadda ee ka qayb galay munaasbada ay balan qaadeen inay sii wadayaan dhiirigalinada caynkan ah oo ay la wadaagayso bulshada iyo macaamiisheeda.